Solid Belt Impingement Freezer, China Solid Belt Impingement Freezer Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Iyo tangi yemahara inonyanya kushandiswa kusunungura zvigadzirwa zvekudya, senge hove fillets, shrimps peeled, squid, dumplings, nezvimwe nekuda kwemweya wayo kuputika maitiro, iyo tangi yemahara inoratidzira yakanyanya kutonhora kushanda uye zvakasiyana siyana zvekushandisa mukugadzira chikafu.
● Bhandi rekutakura rinoratidzira dhizaini dhizaini dhizaini ine yakamira symmetry kuitira kusimudzira kupisa kupisa maitiro.
●Ose maviri magumo eiyo infeed uye outfeed akagadzirwa nemaviri dhiraivha michina kuti unyatso kudzivirira iyo yekuendesa bhandi kubva mukutsvedza.
●Impingement bhendi tanera furiza inoshandisa inopinza inotonhorera yekuchengetera yakamisikidzwa pani yekugadzira mutsara wepaneru kugadzirwa, iyo inovimbisa yakakwira mwero wesimba kugona uye kwakatanhamara kuvimbika uye mhando.
●Impingement bhendi tanera furiza inoshongedzerwa ine yakangwara yepakati kutonga system, otomatiki yekuona mudziyo uye yambiro mwenje, izvo zviri nyore kune vashandisi kuti vashande nekuchengetedza.
Kureba kwemupanda L 10M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M
Solid bhandi upamhi Bhandi upamhi 1500mm, unoshanda upamhi 1440mm
Kureba kwechiteshi 30- 70mm chinjika
Rakasarudzika simba 26kw 37kw 43kw 48kw 54kw 60kw 65kw 71kw